लघुकथा : जँड्याहाको अर्ति
मोहन अधिकारी, सिलगढी, पश्चिम बंगाल, भारत
‘कमल भाई ! म त तँलाई सधैं आफ्नै भाई संझिन्छु,तर तैंले मेरो भावनाको कदर गरेको छस छैनस तैं जान, मैले अस्तिदेखि भन्दैछु त्यो त्यो लक्षेसँग तेरीछोरी कुमजोडेर मस्किदै हिडेको धेरैचोटी भैसक्यो । तँलाई आफ्नीछोरी त्यही जँड्याहाले लगेको हेर्ने मन छ कि क्या हो ?
दिउसै मातेर हिड्ने जँड्याहाले तेरी छोरीलाई जीवनभरी पाल्छ कि पोल्छ ? जँड्याहाले सम्पत्ति कमाउन होईन उडाउनमात्रै जान्दछ भन्ने थाहा छैन तँलाई ?
मातेर दशठाँउ पछारिदै राल सिंगान भएर आएको जंगवीरले कमल लाई यसरी सचेत गराउदै थियो ।